ग्लोबल टि–२० लिगः विनिपेग र गेलको नाइट्स भिड्दै, सोमपाल प्लेइङ ११ मा पर्ने सम्भावना कति? - Everest Dainik - News from Nepal
ग्लोबल टि–२० लिगः विनिपेग र गेलको नाइट्स भिड्दै, सोमपाल प्लेइङ ११ मा पर्ने सम्भावना कति?
काठमाडौं, साउन २१ । ग्लोबल टि–२० क्यानडा लिगको दोस्रो राउण्डको दोस्रो खेलमा नेपाली क्रिकेट टिमका अलराउन्डर सोमपाल कामीआवद्ध विनिपेग हक्सले भंकाभुर नाइट्ससँग खेल्दै भएको छ । यी दुई टिमबीचको खेल बुधबार बिहान २ः१५ बजेदेखि सुरु हुनेछ ।
सोमपालले एडमन्टन रोयल्सविरुद्ध डेब्यू गर्दै खराब प्रर्दशन गरेका थिए । उनले ५ बलमा १ रन मात्रै बनाउन सके । यस्तै बलिङतर्फ पनि २ ओभरमा ३३ खर्चिए । खराब प्रदर्शका कारण सोमपालले भोलि बिहान क्रिस गेलको टिमबीरुद्ध हुने खेलमा प्लेइङ ११ मौका पाउन सक्ने सम्भावना न्यून छ । तर उनी अराउन्ड प्रदर्शन गर्न सक्ने भएकाले गेलको टिमबीरुद्ध साेमपालले स्थान पाउने झिनो आशा छ ।
सोमपालआवद्ध विनिपेगले ५ खेलमा २ मा जीत र ३ खेलमा हारकासहित अंक तालिकाको पाँचौ स्थानमा छ । यदि हक्स बुधबार बिहान हुने खेलमा पराजित भए बाहिरिने छ ।
विजयी भएपनि प्ले अफको लागि अन्य टोलीको नतिजा हक्सको लागि निर्णायक बन्ने समिकरण छ । त्यस्तै नाइट्सले ५ खेलमा ३ मा जित र १ मा हार सहित दोस्रो स्थानमा छ ।
याे पनि पढ्नुस ग्लोबल टि–२० लिगः गेलको विष्फोटक प्रदर्शनमा नाइट्सको शानदार जीत
ट्याग्स: टि–२० क्यानडा लिग, विनिपेग हक्स भर्सेस भंकाकुर नाइट्स